Izindaba - Uma kukhulunywa ngoshokoledi, kumayelana nesikhathi!
Uma kukhulunywa ngoshokoledi, kumayelana nesikhathi!
Ngabe ushokoledi uyakwenza ukhuluphale? Kubonakala kungangabazeki ngakho. Njengophawu loshukela ophakeme, amafutha, namakhalori, ushokoledi uwodwa uzwakala njengokwanele ukwenza umdayisi abaleke. Kodwa manje abacwaningi baseHarvard University bathole ukuthi ukudla ushokoledi ngesikhathi esifanele nsuku zonke kungasiza ukushisa amafutha nokunciphisa ushukela egazini, kunokuba kubangele ukwanda kwesisindo.
Ucwaningo lwangaphambilini luthole ubudlelwane obunciphisiwe phakathi kwemikhuba yokudla ushokoledi nokuzuza kwesisindo sesikhathi eside, ikakhulukazi kwabesifazane abangemva kokuya esikhathini, abasengozini yokukhuluphala. Ngaphezu kwalokho, ukudla amandla amaningi nokudla okuphezulu koshukela okufana noshokoledi ngezikhathi "ezingafanelekile" kungathinta uhlelo lomzimba lomzimba nokusebenza komzimba, okuholele engcupheni yokukhuluphala ngokweqile.
Ukuthola imiphumela yokusetshenziswa kashokolethi ngezikhathi ezahlukahlukene, abacwaningi baqhuba isilingo se-crossover esilawulwa ngokungahleliwe nabesifazane abangu-19 be-postmenopausal. Esimweni sokudla mahhala, izifundo ekuseni (i-MC) nakusihlwa (EC) amaqembu adle i-100g yoshokoledi wobisi (cishe ama-calories angama-542, noma ama-33% wamandla adliwayo nsuku zonke) kungakapheli ihora elilodwa evuka ekuseni noma ihora elilodwa ngaphambi kokulala ebusuku; Elinye iqembu alizange lidle ushokoledi.
Ngemuva kwamasonto amabili, abesifazane emaqenjini asekuseni nakusihlwa babengenaso isisindo esikhulu, yize ushokoledi wayengeze amakhalori. Nezinqe zabesifazane ziyancipha uma bedla ushokoledi ekuseni.
Lokhu kungenxa yokuthi ukudla ushokoledi kunciphise indlala nokufisa amazinyo amnandi (P <. additional="" and="" but="" chocolate="" compensate="" contribution="" did="" during="" ec="" energy="" for="" free="" fully="" intake="" kcal="" mc="" not="" of="" reduced="" the="">
Ukuhlaziywa kwengxenye eyinhloko kubonise ukuthi ukusetshenziswa kukashokoledi ngezikhathi ezimbili kuholele ekusatshalalisweni nasekusebenzeni okuhlukile kwe-microbiome (P <. and="" days="" ec-induced="" episode="" episodes="" had="" heat="" in="" lower="" maps="" mcs="" minutes="" more="" p="." records="" regular="" showed="" sleep="" temperature="" than="" that="" variability="" vs.="" were="" wrist="">
Okusho ukuthi, ukudla ushokoledi ekuseni noma ebusuku kungaba nemiphumela ehlukile ekulambeni, ekudleni, ekungeneni kwe-substrate, ku-glucose yegazi esheshayo, ukwakheka kwe-microbiome nokusebenza, isigqi sokulala nokushisa. Ngaphezu kwalokho, ushokoledi uqukethe nefayibha yokudla, engavimbela futhi iqede ukuqunjelwa, ikhuthaze umzimba ukuthi ukhiphe ama-metabolites amadala, uvikele imibimbi namabala, futhi wakhe indawo enhle yobuhle besikhumba.
Ngakho-ke, ukudla ushokoledi ngesikhathi esifanele, ngeke nje kukhuluphele, kepha kungaba mncane. Kepha "ubuningi buholela kukhwalithi," futhi uma udla ushokoledi omningi kakhulu, imiphumela ingahle ingafani.